अमेरिकन आईडलमा दिवेशलाई भोट गर्न मिलेन ? यस्तो छ नेपालबाट सजिलै भोट गर्ने तरिका (भिडियो सहित) |अमेरिकन आईडलमा दिवेशलाई भोट गर्न मिलेन ? यस्तो छ नेपालबाट सजिलै भोट गर्ने तरिका (भिडियो सहित) – हिपमत
यतिबेला बिदेशी रियालिटी शोहरुमा नेपालिहरुको सहभागीता र चर्चा निक्कै हुन थालेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकन आईडलमा पुगेर विश्व चर्चामा रहेका दिवेश पोख्रेल यतिबेला भोटको आवस्यकतामा छन् । अमेरिकन आईडलमा नेपाली मुलबाट सहभागी हुने उनी पहिलो नेपाली हुन् । पहिलो पटक नेपालीमुलका उनि अमेरिकन आईडलमा सहभागी भएर ईतिहास रच्न पुगेका दिवेशलाई नेपालबाट भने भोट गर्न नमिलेर उनका फ्यान तथा सुभचिन्तकहरु निराश बनेका छन् । तर अर्को बाटो प्रयोग गर्दै भने उनलाई नेपालबाटै पनि भोट गर्न सकिने छ ।
अमेरिकन आईडलको वेबसाईट तथा एपबाट सिधै भोट गर्न खोज्दा नेपाललाई भोटको लागि आधिकारिकता दिइएको छैन । तर उनलाई नेपालबाट भोट गर्न भिपिएन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि एन्ड्रोईड फोन प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो मोबाईलमा रहेको प्ले स्टोरमा गएर “Turbo VPN” एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन आफ्नो मोबाईलमा इन्स्टल गरेपछी ओपन गरेर “United State” छनौट गर्ने । त्यसपछिको प्रक्रियामा तपाईले अमेरिकन आईडलको आधिकारिक वेबसाईट https://idolvote.abc.com/ मा जानुपर्ने हुन्छ । हेर्नुस तरिका सहितको भिडियो